Makenduru anonhuwirira - Nyore uye ekushongedza emhizha | Crafts On
Alicia tomero | | Crafts, Humba Dzemhizha, Kudzokorora
Tsvaga kuti ungaita sei mamwe makenduru akapusa kushongedza wotendeuka mumba mako. Kana kana iwe uchida, izvo zvinogona kugadzirwa uye kupihwa sechipo. Unofanirwa kusarudza sechigadzirwa chikuru Wakisi kana parafini, Pamwe kuitenga kana kuishandisa zvakare kubva kukenduru. Muchiitiko changu ndakashandisazve uye ndanyungudutsa kuti ndikwanise kuzadza mune mamwe maforoma andasarudza. Vanogona kushandiswa Kukosa zvirongo o zvidimbu zvidiki zvegirazi kukwanisa kuvapa yechipiri yekushandisa. Kuti uzive kuzviita, iwe unogona kutarisa yedu yekuratidzira vhidhiyo kana kuona kuti inoitwa sei nhanho nhanho pazasi.
1 Zvishandiso zvandashandisa kumakenduru:
Zvishandiso zvandashandisa kumakenduru:
Wakisi huru mbiri kana makenduru eparafini
Sinamoni-inonhuhwirira mafuta akaomeswa (chero imwe inogona kushandiswa)
Girazi diki regirazi
Shongedzo tambo yemaviri mavara (mune yangu tsvuku uye chena)
Yakapisa silicone nepfuti yake
Tinosarudza makenduru toenda kutyora kuita zvidimbu zvidiki uye kukanda Wakisi kana parafini mundiro. Isu ticharemekedza tambo kuti tikwanise kuishandisa zvakare gare gare. Chinangwa ndechekugadzirisa iyo wakisi kana parafini uye nekuda kweizvi tichazviita mubhati remvura kana mu microwave. Kana tikazviita mu microwave tichafanira kuzvimisira yakaderera simba uye 2 maminetsi zvikamu wotenderera nekapu. Tichada nguva yese yazvinotora kusvika tazoona kuti zvese zvanyungudika zvachose. Tichiri kuinyungudutsa tinowedzera maaspuni maviri kana matatu echinhu kana mafuta anonhuwirira. Mune yangu kesi ini ndashandisa kukosha kwesinamoni. Isu tinomutsa pamwechete newax kuitira kuti mafuta anyatsopinda.
Tinotora chirongo chegirazi kuchishongedza. Tichave tichiputira chidimbu che shinda yekushongedza kumusoro uchichipa majana akati wandei. Isu tinopeta mapfumo muchikamu chepamberi uye tinoita uta hwakanaka.
Tinotora chirongo chekakani nekuchishongedza nacho jute tambo. Muchikamu chezasi chechikepe tichaenda tichimonera tambo uye isu tinonamatira zvishoma nezvishoma nayo inopisa silicone. Tichazvipa pamashanu kana matanhatu emakumbo kana kusvika tazoona kuti rave rakawedzera kana kushoma kushongedza.
Imwe yembiya yandakashandisa ndeye kiyi yakadzokororwa uye yatove yakashongedzwa izvo zvandakanga ndaita mune imwe hunyanzvi, kuti uone kuti zvinoitwa sei unogona kubaya Iyi link. Iyo tambo yatainge takaisa parutivi ichashandiswazve mumakani. Isu tinonamira hwaro hwechiuno mubhodhoro rega rega nedonhwe resilicone, uye isu tichariisa pakati. Isu tinocheka chidimbu cheyakanyanyisa tambo.
Nenamo kana parafini zvanyungudika tinogona kutoidira muhombodo imwe neimwe. Tinobata tambo neruoko kuitira kuti irege kufamba patinoenda kudira wakisi. Iye zvino iwe unofanirwa kungo mirira maminetsi mashoma kuti igo nyatso simbisa uye kuve nemakenduru edu akanaka akagadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Makenduru ane hwema
5 mabasa ekudzokera kuchikoro, chikamu 2
Hanger rack yemasikisi